Strong Woman Do Bong Soon (2017) Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Created byBaek Mi-kyung
StarringAn Woo-yeon, Im Won-hee, Jang Mi-Kwan, Ji Soo, Jun Suk-ho, Kim Min-kyo, Kim Won-hae, Park Bo-young, Park Hyung-sik, Seol In-ah, Shim Hye-jin, Yoo Jae-myung
Synopsis of Strong Woman Do Bong Soon (2017) Complete
မိနျးမဆနျတယျ ဆိုတာ ဘာလဲ ?
မှေးရာပါ ထူးကဲတဲ့ခှနျအားကို ကောငျးမှနျတဲ့ဘကျမှာ အသုံခနြိုငျဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ အဖွဈ Park Bo Young
နှုတျခမျးနီမလေးတှအေသညျးစှဲ ဆှဲဆောငျနိုငျမှုအပွညျ့နဲ့ သူ့ရဲ့နာကွငျမှုတှအေပျေါရိုငျးစိုငျးမောကျမာတဲ့ အမူအကငျြ့နဲ့ဖုံးအုပျထားတဲ့ ခပျဆိုးဆိုး အမှခေံသူဌေးသားဖွဈသလို အငျတာနကျ ဂိမျးကုမ်မဏီ တဈခုရဲ့သူဌေး Ahn Min Hyuk အဖွဈ Park Hyuk Sik
တရားမြှတမှု ကိုအရမျးကိုတနျဖိုးထားတဲ့ စံပွ စုံထောကျအသဈကလေး In Guk Doo အဖွဈ Ji Soo
Do Bong Soon (Park Bo Young) ကသာမာနျလူတှထေကျထူးကဲလို့ မှေးရာပါ ခှနျအားကွီးမားသူမိနျးကလေးတဈယောကျ သတိမထားမိတဲ့အခါမြိုးမှာ ထိလိုကျသမြှကြိုးပဲ့ပကျြစီးသှားစနေိုငျပါတယျ Bong Soon ကသူတဈဖကျသတျကွှနေတေဲ့ Guk Doo(Ji Soo) ရဲ့စိတျကူးထဲကခဈြသူပုံရိပျဖွဈတဲ့ ကြော့ရှငျးလှပတဲ့ မိနျးမတဈယောကျအရမျးကိုဖွဈခငျြနပေါတယျတဲ့ ☺
သူမရဲ့ခှနျအားစှမျးအငျ ကြေးဇူးကွောငျ့ အငျတာနကျ ဂိမျးကုမ်မဏီတဈခုရဲ့ CEO တဈယောကျဖွဈပွီး အမှခေံသူဌေးသား Ahn Min-Hyuk (Park Hyung-Sik) ရဲ့သကျတျောစောငျ့အလုပျကိုရခဲ့ပါတယျ
ဖွဈခငျြတော့ Min-Hyuk (Hyung-Sik) က Guk Doo (Ji Soo) နဲ့လုံးဝကိုဆနျ့ကငျြဘကျဆိုသလို ပိုငျစိုးပိုငျနငျးအထကျစီးကဆကျဆံတတျပွီး စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ နားမလညျ အရေးမစိုကျတတျတဲ့ ဆိုးပေ အမှခေံသူဌေးသားပေါ့
တဈရကျမှာ Bong Soon , Guk Doo နဲ့ Min Hyuk တို့သုံးဦးသား အကွီးစား လူသတျမှုတဈခုနဲ့ ပါတျသတျမိတဲ့အခါမှာ လုံခွုံရေးကွောငျ့ စိတျမပါလကျမပါနဲ့ မဖွဈမနကေို တူတူနရေဖို့အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပါတယျ Min Hyuk ရဲ့ ကွငျနာမှုတှအေပျေါ Guk Doo ကအမှားလုပျမိတဲ့အခါမှာတော့ နားလညျမှူလှဲတဲ့အရာတှေ စတငျဖွဈပျေါလာပါတော့တယျ ဒီဇာတျကားမှာသူတို့ ၃ယောကျကွားက သုံးပှငျ့ဆိုငျအခဈြဇာတျလမျးကို ဟာသလေးတှနေဲ့အတူကွညျ့ရမယျ့ အခဈြဟာသဇာတျကားတဈကားပါ
မိန်းမဆန်တယ် ဆိုတာ ဘာလဲ ?
မွေးရာပါ ထူးကဲတဲ့ခွန်အားကို ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာ အသုံချနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အဖြစ် Park Bo Young
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲ ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအပြည့်နဲ့ သူ့ရဲ့နာကြင်မှုတွေအပေါ်ရိုင်းစိုင်းမောက်မာတဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး အမွေခံသူဌေးသားဖြစ်သလို အင်တာနက် ဂိမ်းကုမ္မဏီ တစ်ခုရဲ့သူဌေး Ahn Min Hyuk အဖြစ် Park Hyuk Sik
တရားမျှတမှု ကိုအရမ်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ စံပြ စုံထောက်အသစ်ကလေး In Guk Doo အဖြစ် Ji Soo
Do Bong Soon (Park Bo Young) ကသာမာန်လူတွေထက်ထူးကဲလို့ မွေးရာပါ ခွန်အားကြီးမားသူမိန်းကလေးတစ်ယောက် သတိမထားမိတဲ့အခါမျိုးမှာ ထိလိုက်သမျှကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ် Bong Soon ကသူတစ်ဖက်သတ်ကြွေနေတဲ့ Guk Doo(Ji Soo) ရဲ့စိတ်ကူးထဲကချစ်သူပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ ကျော့ရှင်းလှပတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အရမ်းကိုဖြစ်ချင်နေပါတယ်တဲ့ ☺
သူမရဲ့ခွန်အားစွမ်းအင် ကျေးဇူးကြောင့် အင်တာနက် ဂိမ်းကုမ္မဏီတစ်ခုရဲ့ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမွေခံသူဌေးသား Ahn Min-Hyuk (Park Hyung-Sik) ရဲ့သက်တော်စောင့်အလုပ်ကိုရခဲ့ပါတယ်
ဖြစ်ချင်တော့ Min-Hyuk (Hyung-Sik) က Guk Doo (Ji Soo) နဲ့လုံးဝကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုသလို ပိုင်စိုးပိုင်နင်းအထက်စီးကဆက်ဆံတတ်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ နားမလည် အရေးမစိုက်တတ်တဲ့ ဆိုးပေ အမွေခံသူဌေးသားပေါ့
တစ်ရက်မှာ Bong Soon , Guk Doo နဲ့ Min Hyuk တို့သုံးဦးသား အကြီးစား လူသတ်မှုတစ်ခုနဲ့ ပါတ်သတ်မိတဲ့အခါမှာ လုံခြုံရေးကြောင့် စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ မဖြစ်မနေကို တူတူနေရဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ် Min Hyuk ရဲ့ ကြင်နာမှုတွေအပေါ် Guk Doo ကအမှားလုပ်မိတဲ့အခါမှာတော့ နားလည်မှူလွဲတဲ့အရာတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ် ဒီဇာတ်ကားမှာသူတို့ ၃ယောက်ကြားက သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ဟာသလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရမယ့် အချစ်ဟာသဇာတ်ကားတစ်ကားပါ
Quality – Web-dl 720p
ProductionJS Pictures, JTBC Studios
Home PageStrong Woman Do Bong Soon (2017) Complete